China ghota & kpochie mmezu oru na onye nnọchite anya | Sunson
Kedụ ka ọrụ nnakọta na mkpọ anyị sirila nyere ndị ahịa aka?
Onye ahịa ahụ kwuru: O juru m anya na ngwugwu ngwaahịa a mara ezigbo mma, ngwaahịa a emebibeghị, onye ahịa ahụ nwekwara afọ ojuju. —— Roman
Anyị na-enye ntụpọ zuru oke zuru oke ma na-emezu mmezu dabara maka mkpa azụmahịa gị!
Nhọrọ kachasị amasị ọtụtụ ndị ahịa anyị bụ ikwe ka njikọta nke API nke Warehouse Management System (WMS) na nyiwe ire ahịa ha na-eji ntụgharị Shopify, Amazon, Magento, Woocommerce wdg. ziga.
Anyị bụ ndị mpako nke anyị nso zuru okè buru ziri ezi ọnụego. Anyị na-eji teknụzụ barcode iji bulie iwu na ndị otu anyị na-enweta ọzụzụ zuru oke ma a na-enyocha iwu ugboro abụọ tupu mbupu.
Anyị na-echekwa ọtụtụ nhọrọ nke ihe nkwakọ ngwaahịa gụnyere igbe dị iche iche, envelopes padded afụchi na ndị na-echebe nkuku. Ndị otu anyị nwere ọtụtụ ahụmịhe na-egosi na ngwongwo niile ezitere ga-adabara nke ọma, jiri ozi ụlọ ọrụ gị mara nke ọma yana ihe ọ bụla na-ere ahịa / ntinye.
Are na-nnọọ na-ezitekwara gị onwe gị nkwakọ ma ọ bụ na anyị nwere ike inyere gị aka ka gị nwere ika nkwakọ arụpụtara na China gị nkọwa.
Offọdụ n'ime ndị ahịa anyị na-etinye aka na ire ahịa mkpọsa nke ngwa ahịa ha yana ahịa Amazon FBA. Anyị nwere ahụmahụ na mbukota nke mbuaha nnukwu iwu.
Ndị otu ụlọ nkwakọba ihe anyị nwere nka na ịmezu mbupu na Centre Amazon FBA na iji ihe ọmụma ha na ahụmịhe ha nwere ike ịnye gị ụzọ nkesa dị oke ọnụ ma dịkwa mfe.
Mgbe onye ahịa chọrọ ọtụtụ ihe dị iche iche (SKU) maka ibikọ ọnụ, anyị na-enwe ike ịchịkọta iwu ndị a n'ụzọ dị mfe ma zie ezi ma nye ndụmọdụ ụzọ kachasị dị irè nke mbufe ọ bụla mba na-aga.
Ntinye ngwa ngwa na izipụ ihe dị mkpa na ecommerce. Anyị nwere ike iburu, buru ma zipu iwu niile ị natara site na 4pm (Oge Beijing) n'otu ụbọchị maka nnyefe zuru ụwa ọnụ site na ọdụ ụgbọ mmiri ị họọrọ.
Nke a nwekwara ike ịba uru dị ukwuu na mmezu nke nnukwu mkpọsa a na-akwado ego, ebe iwu gị niile kwesịrị ịdị ngwa. Anyị nwere ahụmahụ na-arụ ọrụ na mkpọsa Kickstarter na Indiegogo na-enye nsonaazụ kacha mma maka ndị ahịa anyị na ndị na-akwado ha.
China Pick & Pack Ọrụ
Ecommerce Ghota & Ọrụ Ntinye
Buru & Mepụta Ọrụ Mbupu na Nchekwa
Buru & Nkwakọ ngwaahịa Na China Shenzhen
Zụọ ahịa Pick & Pack Service Na China